Die Service sichitha - Anebon Metal Products Co., Ltd.
izixhobo Baza, kunye sikuyo ayabiza, ngoko ke inkqubo ekubunjweni kufa ngokuqhelekileyo kusetyenziswa kuphela mass ukuvelisa inani elikhulu kweemveliso. Kulula kakhulu ukuba ukuvelisa iinxalenye die-kuyiphosa, nto leyo ifuna ngokubanzi amanyathelo ezinkulu ezine kuphela, kunye elisezantsi a ukwenyuselwa iindleko enye. Die ukulahlwa ngakumbi ezifanelekileyo eyimveliso inani elikhulu castings amancinci naphakathi-ertyisi, ngoko sife umtyhido yeyona ngokubanzi kweenkqubo ezahlukeneyo eyahlulayo. Xa kuthelekiswa nezinye iindlela eyahlulayo, umphezulu die-bumba yi olulungelelanisiweyo kwaye guquki ephakamileyo ntathu.
Yintoni Ivoti Die?
ukulahlwa Die yinkqubo metal eyahlulayo luphawulwa ukusetyenziswa umngxuma sokubumbela ukusebenzisa uxinzelelo ophezulu ukuya etyhidiweyo. • Umngundo ngokuqhelekileyo ngomshini ukusuka aluminiyamu amandla ephakamileyo, ezinye zazo efana isitofu sukube. Uninzi kufa castings entsimbi-free, ezifana zinc, ubhedu, i-aluminiyamu, nemagnesium, ilothe, nebhekile, nelothe, nebhekile aluminium kunye nezinye aluminium. iyafuneka Ngokuxhomekeka kuhlobo eyahlulayo kufa, igumbi abandayo ufe bephosa umatshini okanye egumbini ashushu ufe bephosa umatshini.
Ukulahlwa siyafa indlela eyahlulayo apho ulwelo ingxubevange otyhidiweyo obuthelwe kwigumbi wegazi, em- sokubumba sobhedu agcwaliswa ngesantya esiphezulu, kwaye ulwelo ingxubevange leyo eqina phantsi koxinzelelo ukwenza eyahlulayo. Ezona mpawu ziphambili umtyhido kufa ezahlula kwezinye iindlela umtyhido ezi koxinzelelo oluphezulu kunye ngesantya esiphezulu.
1. igcwalisa Le etyhidiweyo lweHo- phantsi koxinzelelo kwaye crystallizes noxinzelelo ephezulu. Uxinzelelo exhaphakileyo 15-100 MPA.
2. Metal ulwelo lizele lweHo- ngesantya esiphezulu, ngokuqhelekileyo 10-50 m / s, kwaye kananjalo abanye lingaba ngaphezu 80 m / s, (isantya umgca onqumla ingate ibe lweHo- - isantya ingate), ngoko ixesha ukugcwaliswa le etyhidiweyo kukuba kakhulu elifutshane, kwaye lweHo- unokuhluthiswa kwimizuzwana malunga 0.01-0.2 (kuxhomekeke kubukhulu ukulahlwa).
Die-ukulahlwa yindlela ngendlela eyahlulayo. Die-bephosa iinxalenye uphoswe yi die-eyahlulayo, babe nokumelana ezincinane kakhulu mbini kunye ngqo phezulu komhlaba. Kwiimeko ezininzi, afe-bephosa izahlulo zibe ndawonye ngaphandle sakujika. Iinxalenye nabo uphoswe ngqo.
Ziziphi iingenelo iinkonzo ivoti die?
Inkqubo yethu mbuso die ngodongwe uluncedo ezininzi ezibalulekileyo, kuquka:
l ulwenziwo: Inceda ukuphumeza nokuyila ezintsonkothileyo kunye neefom ezenza kube lula ukuba wenze castings ukuya kwiinkqubo zokuvelisa ethile.
l l ixabiso elisezantsi
l l Multi-functional umhlwa-resistant
l effiency High
Njengoko i umenzi die-bephosa, Anebon Die siwisa ukunikela epheleleyo, ibandla olunzulu kunye nokuvavanywa zonke iinxalenye kufa-bumba kunye neemveliso. Enoba unomdla amacandelo ezikhethekileyo ezifana aluminiyamu die ngodongwe okanye lwepolitiki ufe, ongasilandeliyo thina, okanye nje ndifuna ukuba umatshini ibe inxalenye entsha, unako ukufumana amava inkonzo epheleleyo efektri yethu.
Le metal we sebenzisa ekubunjweni kufa ikakhulu ziquka zinc, ubhedu, i-aluminiyamu, nemagnesium, ilothe, nebhekile, kunye aluminium zikhokelela-tin njl Nangona kwesinyithi kunqabile, kubuye kube nokwenzeka. Iimpawu zesinyithi ezahlukeneyo ngexesha umtyhido kufa zezi zilandelayo:
• Zinc : I-metal lula kufa-kuyiphosa, enoqoqosho xa mveliso namalungu amancinane, kulula idyasi, amandla aphezulu compressive, plasticity ophezulu, kunye nobomi ngodongwe elide.
• Aluminiyam : Indlela yobunjani ephakamileyo, lemveliso ezintsonkothileyo castings ezibhityileyo-ezibiyelweyo uzinzo high mbini, ukumelana eliphezulu umhlwa, iimpawu ezintle ngomatshini, conductivity eliphezulu thermal kunye Unikezelo lombane, kunye namandla eliphezulu kwiqondo lobushushu eliphezulu.
• magnesium : Kulula kumatshini, amandla eliphezulu ukuya ratio ubunzima, ngokobunzima zonke iintsimbi die-ziphosa ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo.
• Ubhedu : ngokuba lukhuni High kunye nokumelana enamandla umhlwa. Le metal die-uphoswe ezininzi ezisetyenziswayo ngokuqhelekileyo na iimpawu best mechanical, anti-kukuwohloka namandla kufutshane kwensimbi.
• Ukukhokela nenkcenkce : mninzi High kunye nokuchaneka eliphezulu mbini iinxalenye yokhuseleko umhlwa okhethekileyo. Ngenxa yezizathu zempilo yoluntu, le intsila ayikwazi kusetyenziswa njengeziko processing ukutya kunye nokugcinwa. Khokela-tin-bismuth aluminiyamu (ngamanye amaxesha equlethe ubhedu elincinane) zingasetyenziswa ukwenza boonobumba ngesandla-igqityiwe kwaye sokunyathela eshushu weempapasho.
izahlulo eyahlulayo kufa , zinc izitho ukulahlwa kufa, iindawo ezikhupha , aluminiyam kufa uphose , aluminium ukulahlwa, izahlulo aluminiyam zifa bephosa ;